महोत्सवको आम्दानी पारदर्शी बनाएर जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्छाैं
कला/साहित्य कृषि तपाईको साता फिचर फोटो
छैठौं नुवाकोट महोत्सव २०७६ मूल आयोजक समिति
यतीबेला जिल्लामा नुवाकोट महोत्सवको रन्को शुरु भईरहेको छ । नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा हुन गईरहेको छैठौं नुवाकोट महोत्सवको सम्पुर्ण तयारी पूरा भएर आज विहिबार उद्घाटन हुँदैछ । महोत्सव माघ १६ देखि २६ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । महोत्सवको ब्यस्तताले संघका पदाधिकारी बेफुर्सदी बनेका छन् । महोत्सवलाई कसरी भव्य, सभ्य बनाउन नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ताराबहादुर कार्की यतीबेला ब्यस्त छन् । पर्यटन वर्ष २०२० को सन्र्दभमा हुन गईरहेको महोत्सवले जिल्लाको पर्यटकिय क्षेत्रको समेत चिनारी गराउने छ । जिल्लाको स्थानीय उत्पादन, कला, संस्कृतीको उजागरको साथै ब्यापार मेलासमेत भएकाले महोत्सव थप प्रभावकारी हुनेछ । विगत १५ वर्षदेखी जिल्लाको उद्योग वाणिज्य संघमा आवद्ध भएका कार्की २०७५ चैत्रदेखि दोस्रो कार्यकाल अध्यक्ष भएर काम गरिरहेका छन् । वाणिज्य संघको सल्लाहकार, कार्यसमिति सदस्य, उपाध्यक्ष हुँदै दुई कार्यकाल अध्यक्ष भएर यो समेत ३ पटक महोत्सव गर्दैछन् । सबैलाई मित्रवत ब्यवहार गर्ने मिलनसार ब्यक्तित्व भएका अध्यक्ष कार्कीसँग महोत्सवको तयारी र यसको विषेशताको सन्र्दभमा त्रिशूली प्रवाह साप्ताहिकले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :–
छैठौँ नुवाकोट महोत्सवको तयारी र सञ्चालन कसरी अगाडि बढेको छ ?
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई जोडेर नुवाकोटको कृषि, जलविद्युत् र पर्यटनको विकासको लागि महोत्सव गर्न लागेका छौं । महोत्सवले जिल्लाका कृषिमा लागेका उद्यमीलाई हौसला प्रदान गर्ने कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग र ब्यवसायको प्रर्वद्धन गर्न महोत्सव केन्द्रीत रहेको छ । महोत्सवको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएर आज बिहिवारदेखि छैठौं नुवाकोट महोत्सव उद्घाटन हुँदैछ । महोत्सवमा इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक, औद्योगिक, हस्तकला, कृषिजन्य सामाग्री, पुष्प, अटो सूचना तथा प्रविधिको सामाग्री प्रर्दशनलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु, घरायसी सर–सामान, लत्ताकपडा, श्रृङ्गारका सामाग्रीको बिक्री–वितरण गरिने छ । माघ १६ देखि २६ गतेसम्म हुने महोत्सवमा राष्ट्रियस्तरका उद्योगी, ब्यवसायीलाई निम्ता दिएका छौँ । उहाँहरुले नुवाकोटमा सञ्चालन हुन सक्ने उद्योग, ब्यवसायको बारेमा स्थानीयसँग छलफल र अन्र्तक्रिया गर्ने कार्यक्रम बनाएका छौं । उहाँहरूलाई जिल्लाको भूगोलको जानकारी गराउछौं । स्थानीय निकायसँग पनि छलफल गराएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउने छौं । महोत्सवले कृषि, पर्यटन, उद्योग, धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रहरुको पहिचानका साथै प्रचार–प्रसार गर्छौं । जसले गर्दा भ्रमण वर्ष सफल बनाउनलाई पनि सहयोग पुग्नेछ ।
महोत्सवले जिल्लामा उद्योग स्थापनामा के सहयोग पुग्छ ?
नुवाकोट काठमाडौंसँग जोडिएको हुँदा–हुँदै पनि बाहिरको लगानी आउन सकेको छैन । जिल्लाका लगानीकर्तामा पनि विश्वास जगाउन सकिएको छैन । महोत्सवमा जिल्लामा उद्योगको लागि आवश्यक बिजुली, सडक, पानी, जमिन प्रयाप्त रहेको प्रचार–पसार गर्छौं । लगानीको लागि ‘क’ वर्गका बैंकका दुई दर्जन भन्दा बढी शाखा खुलेका छन् । बैंकले उद्योगको लागि लगानी गर्न तत्परता देखाएका छन् । उद्योगको लागि जिल्लामा अहिले अनुकूल वातावरण बनेको छ । स्थानीय सरकार उद्योग स्थापना र ब्यवसाय बिस्तारको लागि हातेमालो गर्न नीति नै बनाएर आउनुभएको छ । महोत्सवमा जिल्लाको ब्यवसायी संभावनालाई छलफल र अन्र्तक्रियाको माध्यमबाट अगाडी बढाउछौं । जिल्लामा कृषि र पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योग र सेवा सम्बन्धित ब्यवसायको संभावनालाई महोत्सवले उजागार बनाउने छ । विगतको महोत्सवपछि जिल्लामा स्तरीय होटल, पाइप कारखाना, पशुपन्क्षीका दाना उद्योग र निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योग सञ्चालन भएका छन् । यो महोत्सवमा हामीले सयौं उद्योगी, ब्यवसायीलाई भित्र्याएर जिल्लाको अवलोकन गराएर उद्योग स्थापनामा अभिप्रेरित गर्ने छौं । अहिले जिल्ला भएर उत्तर–दक्षिण राजमार्ग सञ्चालन भएको छ । भारत र चीनको बिचमा नुवाकोट रहेकोले उद्योगको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, उपकरण ल्याउन र उत्पादन भएको सामान बिक्री वितरणको लागि पठाउन सहज छ । रसुवागढी–ठोरी नाका सञ्चालनमा आएसँगै जिल्लामा उद्योगी ब्यवसायीको नजर परेको छ
सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोगको अपेक्षा गरेर भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ । भ्रमण वर्षमा सफल हुँदा देशले लाभ लिन सक्ने भएकोले नुवाकोटमा देशका मात्र नभएर भारत र चीनका पर्यटक पनि ओहोर–दोहोर गर्ने भएकाले महोत्सव अवधिभर पर्यटकको स्वागत गर्छौं । जिल्लाको पर्यटकीय संभावना भएको क्षेत्रको प्रचार–पसार गर्छौं । विदेशी पर्यटक भित्र्याउन नसके पनि हामीले ७७ वटै जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघलाई निमन्त्रणा गरेका छौं । उहाँहरू आउनुहुनेछ । नुवाकोटको बारेमा जानकारी लिएर जानुहुनेछ । आन्तरिक पर्यटक प्रर्वद्धन गरेर पनि हामी भ्रमण वर्ष सफल बनाउन टेवा पु¥याउने छौं । जिल्लाकै भ्रमण गर्नको लागि पनि जिल्लाबासीलाई अभिप्रेरित गर्नेछौं । यो हाम्रो अभियानमा सबै क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य छ । जनजातिको बाहुल्यता रहेको जिल्ला भएकोले जनजातिको भेषभुषा, धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज, खानाको प्रचार–पसार महोत्सवमा गरेर जिल्लामा आन्तरिक पर्यटक प्रर्वद्धन गर्छौं ।
उद्योग वाणिज्य संघको काम महोत्सव मात्रै हो त ?
उद्योग वाणिज्य संघको काम भनेको उद्योग, ब्यवसायको लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, जिल्लामा संभावना भएका उद्योग स्थापनामा पहल गर्ने, भएका उद्योग, ब्यवसायलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने र संघका सदस्यको हक र हित गर्ने हो । संघले स्थापनादेखि नै जिल्लामा सहज र सरल रूपमा दैनिक उपभोग्यीय र निर्माण सामाग्रीको आपूर्ति गरिरहेको छ । संघले जिल्लामा उत्पादन भएका वस्तुको बजारीकरण गर्ने काम पनि गर्छ । जिल्लाका उत्पादित सामाग्रीको बजारीकरण गर्न उत्पादक र उपभोक्तालाई एउटै थलोमा जमघट गराएर बिक्री वितरण गर्न महोत्सवमा सहज हुन्छ । संघले २०६३ बाट शुरू गरेको महोत्सवलाई निरन्तरता दिंदै आएको छ । संघका पूर्व अध्यक्ष शरण उत्सुक सापकोटाले २०६३ मा पहिलो र २०६६ मा दोस्रो महोत्सव गरेर जिल्लामा कृषि र पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योग, ब्यवसायको प्रर्वद्धन शुरू गर्नुभएको थियो । महोत्सव हामीले सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन वर्ष सफल बनाउनको लागि सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले यसपटक गरेका हौं । महोत्सवको आम्दानी पारदर्शी बनाएर जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गरेका छौं । संघको गतिविधी बाहिर ल्याउन र जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक विकासको लागि पनि महोत्सव आवश्यक छ । महोत्सवलाई नकरात्मक ढंगले मात्र हेर्नु हुँदैन । यसले पार्ने दुरगामी प्रभावको बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्छ । महोत्सव अवधिभर स्थानीय क्षेत्रमा हुने आर्थिक गतिविधीलाई पनि मूल्याङ्कन गरेर महोत्सवको बारेमा टिका टिप्पणी गर्दा राम्रो हुन्छ । संघले गर्ने काममध्ये एउटा मेला महोत्सव पनि हो । महोत्सवले स्थानीय सिप र सिर्जना, कला र संस्कृति, धार्मिक र ऐतिहासिक धरोहरको प्रचार–पसार गरेर आन्तरिक, बाह्य पर्यटक प्रर्वद्धनमा टेवा पु¥याएको छ ।
महोत्सव मनोरञ्जन केन्द्रित भयो भन्ने आरोप छ नी ?
महोत्सव भनेकै मनोरञ्जनको थलो हो । स्थानीय कला, संस्कृति, प्रतिभा, भेषभुषा प्रर्दशनी र अवसर दिने महोत्सवमा थलो हो । नुवाकोटकै मात्र सिप, सिर्जना र उत्पादनको यसपटक एकसय वटा भन्दा बढी स्टल राखेका छौं । महोत्सवमार्फत् जिल्लाको कृषि, धार्मिक, ऐतिहासिक क्षेत्रको प्रचार–पसार गराएका छौं । महोत्सव स्वभाविक रुपमा रमाईलो पनि गरिन्छ । तर, सबै कार्यक्रम रमाईलोको लागि मात्र छैनन् । रमाइलो हेर्न आउने आन्तरिक पर्यटकहरुले गर्ने आर्थिक क्रियाकलापले नुवाकोटलाई फाईदा पुग्छ । यसपटक हामीले नुवाकोटका उत्पादनलाई खोजी–खोजी स्थान दिएका छौँ । महोत्सवले मनोरञ्जन मात्र दिन्छ भन्नु गलत हो ।
महोत्सवमा कति फाईदा हुने अनुमान गर्नुभएको छ ?
महोत्सवबाट फाईदा भन्दा पनि जिल्लाको कला, संस्कृतिको जगेर्ना, ऐतिहासिक एंव धार्मिक स्थलको प्रचार–पसार र कृषि उत्पादनको जानकारी गराउने उद्देश्य लिएका छौं । महोत्सवमा जसरी पनि फाईदै गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छैनौै । महोत्सवमा जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, एकल महिला र असाहयको लागि प्रवेश निःशूल्क गरेका छौं । विद्यार्थीको लागि ४० प्रतिशत प्रवेश टिकटमा छुट गरेर भिन्दै टिकट छापेका छौं । हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै जिल्लामा भएका संघ–संस्था र ब्यक्तिको सल्लाह र सुझावलाई लिएर काम गरिरहेका छौं । यसपटक एक लाख भन्दा बढी अवलोकनकर्ता भित्र्याउने गरी लागिरहेका छौं । हाम्रो उद्देश्य पूरा हुन्छ नै । ७७ जिल्लाबाट हामीले पाहुना बोलाएका छौँ । महोत्सवमा भएका आम्दानी जिल्लाकै उद्योगी, ब्यवसायी र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्छौं ।
हामीले महोत्सवको दर्शकलाई आकर्षित गर्न धेरै काम गरेका छौं । जिल्लाको १२ वटै स्थानीयतहसँग समन्वय गरेका छौं । सबै स्थानीयतहको सहभागिता हुँदा हामीले लक्ष्य राखेको अवलोकनकर्ता आउनेमा हामी विश्वस्त छौं । काठमाडौं नजिक भएकोले पनि अवलोकनकर्ता बढ्छन् । जिल्ला छाडेकालाई मात्र पनि महोत्सवमा ल्याउन सक्यौं भने एक लाख भन्दा बढी अवलोकनकर्ता हुन्छन् । महोत्सवको प्रचार–पसार, राष्ट्रियस्तरका विभिन्न विधाका कलाकारहरू, स्थानीय कलाकारलाई सम्झौता गरेर आउने तालिका सार्वजनिक गरेका छौं । जिल्लाका सबै सञ्चार माध्यमले प्रचार–पसारमा सहयोग गरिरहनु भएको छ । जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने संघीय, प्रदेश, माननीयज्यूहरूको साथ र सहयोग हामीले पाएका छौं । उहाँहरूले महोत्सव सफल बनाउन र अवलोकनकर्ता बढाउन चासो राख्नुभएको छ । स्थानीयबासी महोत्सवमा सहभागी हुन आतुर छन् । यी सबै माथिका कारणले पनि महोत्सव भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न हुन्छ । हामीले राखेको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा हुनेमा म विश्वस्त छु ।
← पुस्तकालय भवन उद्घाटन
झोले र पोके ब्यापारीलाई रसुवागढीमा प्रतिबन्ध →